- အချိန်နဲ့စည်းကမ်းကို တိတိကျကျ လိုက်နာတဲ့သူ၊ အလုပ်ထဲမှာ စိတ်ပါဝင်စားပြီး ကြိုးစားလုပ်ကိုင်တဲ့သူ၊ အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်ရင် စနစ်တကျ လုပ်တတ်တဲ့သူရဲ့ ရှေ့ရေးကို သတ်မှတ်တဲ့ စိတ်အခြေအနေ။
- အချိန်မရှိတော့ဘူး! မြန်မြန်လုပ်! လို့ မိမိကိုယ်မိမိ လက်ခံယူဆသူအနေနဲ့ လက်ကျန် အသက်ရှင်ခွင့်ရနေတဲ့ အချိန်လေးမှာ သိစရာရှိတာတွေကို အမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ သိနိုင်အောင် အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ လှုပ်ရှားနေတဲ့ စိတ်အမျိုးအစား။
- အဆိုးရွားဆုံး ပြဿနာတစ်ခုနဲ့ ကြုံပြီဆိုရင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ အစီအစဉ် မရှိသူတိုင်း တွေ့ကြုံကြရမယ့် စိတ်အနေအထားပါပဲ။ စိတ်အကြောင်းကို သိအောင်ကြိုးစားဖို့ အချိန်ရောက်နေပြီဆိုတာ ဒီခေါင်းစဉ်က သတိပေးလိုက်သလိုပါပဲ။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အမြဲတမ်း ရှိနေတဲ့ ကာမဂုဏ်အာရုံတွေဟာ မိမိဘ၀ထဲကို အချိန်မရွေး ၀င်လာပြီး မွှေနှောက်ဖျက်ဆီးဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါတယ်။ စိတ်ကိုမှီပြီး ခြယ်လှယ်တတ်တဲ့ စေတသိက်တွေထဲက ဖဿ၊ ဝေဒနာ၊ မောဟ၊ စေတနာ၊ လောဘ၊ ဒေါသတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု အဆက်မပြတ် ၀င်လာရင်တော့ သေဖို့သာပြင်ပေတော့။
- လမ်းပေါ်မှာ နေချင်သလိုနေ၊ လမ်းပေါ်မှာ ကြုံသလိုစား၊ အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့ အခြေအနေမဲ့၊ လေလွင့်နေတဲ့သူတွေရဲ့ စိတ်အမျိုးအစား။
- ပျော်ရာမှာနေ၊ ပျော်ရာမှာစား၊ စိတ်ကိုလွှတ်ပြီး စိတ်အလိုလိုက်နေသူတွေရဲ့ စိတ်အမျိုးအစား။
- အဘက်ဘက်မှာ တတ်သိနားလည်၊ ကျွမ်းကျင်ထက်မြက်ပြီး လူသားချင်း စာနာစိတ် အပြည့်ရှိသူကို မိမိကိုယ်တိုင်က ရိုသေလေးစားပြီး စိတ်ထဲမှာ ကြည်ညိုနေတဲ့ စိတ်အမျိုးအစား။
- ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေ မရှိရင် ဖြစ်တတ်တဲ့ စိတ်အနေအထား။
- ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားတတ်တဲ့သူတွေဟာ ဘာပဲလုပ်လုပ် အချိန်နဲ့အလုပ် အံကိုက် ကွက်တိဖြစ်နေတဲ့ စိတ်အနေအထား။
- မိမိစိတ်အနေအထားက ဘာကို အလိုဆန္ဒကြီးနေတာမျိုးလဲ? ဆိုတာ ကွဲကွဲပြားပြား သိဖို့လိုတယ်။ တဏှာရာဂလား? ကာမဂုဏ် အာရုံတွေကိုလား? တရားအသိဉာဏ်ရဖို့လား?
- ကာယကံမြောက် ကျူးလွန်ကြတဲ့ တစ်စုံတစ်ရာအပေါ်မှာ စိတ်တူ၊ ကိုယ်တူ၊ သဘောတူ ကျေကျေနပ်နပ် ပူးပေါင်းမိတဲ့စိတ်။
- ရန်သူဘက်မှာ စိတ်ရော၊ လူရောပုံပေးထားပြီး မိမိနိုင်ငံ၊ မိမိလူမျိုး၊ မိမိဘာသာကို သစ္စာဖောက်တဲ့အပြင် ရန်သူနဲ့ပေါင်းပြီး မိမိ လူမျိုးအချင်းချင်းအပေါ်မှာ ညှဉ်းဆဲနှိပ်စက်တဲ့ စိတ်အမျိုးအစား။
- မိမိစိတ်ဆန္ဒနဲ့ မကိုက်ညီတဲ့အခါတွေမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ စိတ်သဘောထား။
- အလိုရှိနေတဲ့ တပ်မက်ခြင်း တဏှာအဆင့်ကနေ ကျော်လွန်ပြီး စွဲလမ်းတဲ့အဆင့် ရောက်သွားတဲ့အခါမှာ လိုချင်တာကို မရရအောင် ယူတော့မယ့် စိတ်အဆင့်ကို ကြောက်စရာ၊ ရွံစရာကောင်းလောက်အောင် ရောက်သွားတဲ့ စိတ်အဆင့်။